Powder Cranmic Granulation budada ...
WFA loogu talagalay Refractories
Sodium Calcined Alumina (HA) Taxanaha budada ah ee qalalan
Kooxda YUFA waxay maalgashi badan oo cilmi-baaris ah ku sameysay warshadaha alumina-sodium-hooseeya.
Waxaan soo saarnay tikniyoolajiyad yar oo soodhiyam ah oo heer caalami ah oo horumarsan kana jawaabeysa baahiyaha suuqa hooseeya ee soodiyamka alumina, kaas oo si wax ku ool ah u xaqiijiyey habeynta.
1. Macluumaadka Na2O wuxuu ka yaraan karaa 0.01%
2. Ku habboon codsiyada badeecadaha kala duwan
Taxanaha Sodium Calcined Alumina (CA) ee taxanaha dhoobada
Kooxda YUFA waxay soo saari kartaa silsilado kala duwan oo alumina ah oo dhoob ah taas oo ku habboon u dhinashada tuurista kulul, cadaadiska isostatic, ama cadaadiska qalalan iyo habka kale ee sameynta.
1. Sodium-yar, oo ka hooseysa 0.1%.
2. Alumina Nadiif Sare
3. Cabbirka Crystal waa la habeyn karaa
Calcined Alumina (RA) Taxanaha Qalabka Maqaarka
Kooxda YUFA waxay soosaartay alumina calcined wax qabadkeedu sarreeyo oo ku saleysan wax ka badan 30 sano oo khibrad soo saar ah ah.
Alaabada ceyriinka ee diidan ee alumina ee la soo saaray iyada oo la adeegsanayo tikniyoolajiyad wax soo saar oo gaar ah iyo qalabka wax lagu karsado ee wareegga wareejiya iyo tunnelka ayaa si wanaagsan loogu iibiyaa in ka badan 40 suuqyada dibedda ah.
1. Cufnaanta badan ee badan, yaree isticmaalka biyaha ee qalabka wax lagu karsado ee aan la qaabeyn
2. Baaruudda asalka ahi wey yar tahay, waxay leedahay firfircoonaan sintering iyo xasiloonida mugga
3. Iska yaree ama beddel qadarka budada kale ee aadka u ganaaxsan lana hagaajiyo astaamaha heerkulka sare ee farsamooyinka qalabka wax lagu karsado
Taxanaha Calcined Alumina (PA) ee Nadiifinta
Alumina calcin-ga ah ayaa lagu soo saaraa cabirro kala duwan iyadoo lagu saleynayo baahida macaamiisha. Taxanaha
1. Taxanaha nadiifinta ee wanaagsan: Baddalka asalka ah wuxuu ka yar yahay 1 μm 2. Taxanaha sifaynta dhexdhexaadka ah 3. Gaar u ah wax cufan oo wax u dhalaalaya
Calcined Alumina (FA) Taxanaha Ku-dhaqanka Kuleylka
Alumina waxay leedahay faa'iidooyinka kuleylka kuleylka iyo dahaarka, waxaana loo isticmaali karaa in lagu buuxiyo kuleylka kuleylka kuleylka ee loogu talagalay diyaarinta koolada kuleylka kuleylka kuleylka kuleylka ah, dhejinta dhejiska iyo walxaha kale ee polymer.
Alumina si tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah u sameysa xaaladaha heerkulka sare. Waxaa jira budo badan oo crystalline ah. Alumina loo isticmaalay kuleylka kuleylka waxaa ka mid ah alumina goobeed, alumina quasi-spherical, iyo alumina isku dhafan.
1. Qaybinta cabirka walxaha macquulka ah, sicirka buuxinta badan, isku-darka hooseeya iyo isku-darka dareeraha wanaagsan ayaa la heli karaa
2. Dhaqdhaqaaqa kuleylka sare, marka la barbardhigo silikoon crystalline, kuleylka kuleylka ee isku dhafka ayaa sarreeya
3. Heerka abrasion-ka oo hooseeya: muuqaalku waa mid goobaaban, oo xoqidda makiinadda iyo makiinadda sameysmaya ayaa yar
4. Macdanta soodhiyamka iyo waxyaalaha u eg ion-ka ee chlorine-ka ayaa aad u yar, waxayna leedahay caabbinta qoyaan koronto oo wanaagsan
Taxanaha Low-Sodium Calcined Alumina (SA) ee Muraayadaha Gaarka ah
Kooxda 'YUFA Group' Al-Alumina waxay isticmaashaa nidaam kalsiisaysan oo gaar ah waxayna leedahay astaamaha nadiifnimada sare, waxyaabaha Fe2O3 hooseeya Waa sheyga ugu weyn ee ceyriinka loogu talagalay LCD substrate galaas iyo galaas aluminium sare daboolaya.
1. Nadiif sare & wasakhda aadka u hooseysa.
2. Heerka isbeddelka wajiga alfa.
Taxanaha dhoobada dhoobada dhoobada (GA) ee loogu talagalay alumina dhoobada
Kooxda YUFA waxay doortaa alumina saafi ah iyo cabbirka ku habboon, taas oo isticmaasha cadaadiska ama habka buufin farta si ay u soo saarto 92, 95, 99, 99.5 iyo noocyo kale oo ah budada granulating. Waxay ku habboon tahay cadaadiska qallalan, shaabad degdeg ah, cadaadiska isostatic iyo habab kale.
1. Heerkulka dhoobada dhoobada yar
2. Joogteynta budada wanaagsan
3. Cufnaan sare, ma leh daloolo ku sameysma sameynta dhoobada
Alaabada dhoobada ee Alumina
YUFA Group sidoo kale waxay ku takhasustay soo saarida dhimbiilayaasha ceelaleyda dhoobada, tuubooyinka dhoobada, shidaalka ceelasha shidaalka iyo alaabada kale. Isticmaalka cadaadiska isostatic, kuleylka heerkulka sare ee dhoobada. Waxay soo saari kartaa fiilooyin dhimbiil kala duwan, tuubooyinka dhoobada iyo alaabooyin kale oo dhererkoodu ka yar yahay 150 mm.
1. Cufnaan sare
2. Awood sare
3. Iska caabin koronto oo wanaagsan
4. joogteynta cabirka wanaagsan
Monocrystalline alumina isku dhafan, oo ku dhalaalaya heerkulka sare ee habka gaarka ah, waa qalab wax shiidaya dhamaadka-sare. Qaybaha la xoqin karo waa kuwo cad-cad.
1. Sodium hoose, ka hooseysa 0.2%
3. Adag adag
Cufnaanta bulk 4.High iyo iska caabin duugga sare
5.High-dhamaadka wax xoqdo
6.Karaf yar, ma fududa in la waxyeeleeyo qalabka shaqada
Fused Alumina Magnesia Spinel waa nooc cusub oo nadiif ah oo dabiici ah oo soosaara farsamooyin diirran oo laga sameeyay alumina iyo magnesia nadiif ah oo aad u nadiifsan oo ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee ceeriin ku jira foornada foorarka korantada ka dib markii lagu dhalaalay heerkul sare oo ka badan 2000 ℃ ka dibna la qaboojiyey.
1. Cufnaanta badan ee jumlada
2. Iska caabin nabaad guur oo xoog leh
3. U adkaysiga daxalka
4. U adkaysiga slag wanaagsan iyo xasilloonida dhul gariirka
Fudud cufan oo cufan ayaa ah nooc cusub oo ah qalab diif badan oo saafi ah oo lagu sameeyay iyadoo la adeegsanayo alumina saafi ah iyo yareynta wakiilka saamiga qaarkood, ku dhalaalaya foornada aaladda korontada oo la qaboojiyey. Wejiga ugu weyni waa α-Al2O3 midabkiisuna waa cawl khafiifa.
Cufnaanta badan ee weyn iyo daaqa aad u hooseeya
2.Exc heer sare iska caabin ah
Iska caabinta wanaagsan ee sagxadda heerkulka xun
Xasiloonida mugga sare
5.Good caabbinta shoogaanta kuleylka leh
Alumina fused white waa alaab ceyriin ah oo diidan oo heer sare ah, oo ka samaysan budada alumina warshad tayo sare leh kadib markii lagu dhalaalay heerkul sare oo ka sareeya 2200 ℃ foornada korontada u janjeera kadibna la qaboojiyey. Wejigeeda muraayadaha ugu weyni waa α-Al2O3, midabkiisuna waa caddaan.
Waa sheyga ceyriinka ugu weyn ee wax soo saarka ee refractories fasalka sare unshaped iyo qaabeeya, waxaa si ballaaran loo isticmaalaa in warshadaha kala duwan.
2.Good iska caabin ah iyo iska caabin ah daxalka
Heerkulka load 3.High marka la samaynayo alaabta
4.Ku hagaaji xasiloonida mugga iyo adkeysiga kuleylka ee qalabka.